Imibongo yeKrisimesi 2017 mfutshane kubantwana - ukudumisa. Iindinyana ezimfutshane eziqhelekileyo ngeKrisimesi kubantwana
IKrismesi yiholide evuyayo kwaye ilinde ixesha elide kubo bonke abantu abangamaKristu, bhiyozelwa ngamakhulu eminyaka kwiingoma nangeengoma. Omnye unokucela kuphela umMerika okanye umFrentshi, umSerbia okanye waseAustralia, isiRashiya okanye isiNgesi, apho badibanisa iKrismesi - kwaye unokuva ezininzi izimpendulo ezahlukeneyo. Ngokomzekelo, abantwana baseKhanada, iRashiya ne-Ukraine iholide eqaqambileyo ifana nesithwathwa sesiliva, iphunga lomthi omnandi kunye neentleksi zeeshokoleta. Kuba abemi beli lizwe, uKrismesi yi-gingerbread kunye nexesha lokufudumala ngokufudumala phantsi kwe-yelp yabantwana abonwabileyo ukuhlutha izipho ezininzi. Kubantu baseAfrika iholide inxulumene nomthi omude wamasundu, uxhonywe ngeemigulane ezide. Bangaphi abantu, ezininzi iingcamango! Kodwa kukho enye into ebalulekileyo edibanisa iintlanga ngokupheleleyo kwisimo sengqondo sazo kwimibhiyozo enkulu yecawa. Ngokuqinisekileyo bonke abantu abadala kunye nabantwana bayamhlonela kwaye bekwesaba ngokukhawuleza baliphulaphule imibongo emfutshane kunye nexesha elide malunga neKrisimesi ngesiRashiya, isiNgesi, isiFrentshi kunye nolunye ulwimi. ImiSebenzi yeeklasikhi, indalo yabantu kunye neestoksi zemizekelo yesintu zisetyenziselwa imikhosi yeKrismesi kunye nemizi, zifundiswa abantwana esikolweni, oomama bafundwa kubantwana njengengqungquthela yokubhalwa kweholide yobusuku. Ixesha lokuba uthabathe iingqungquthela ezimfutshane kunye nemihlali yeKrismesi 2017 kubantwana, emva kokuba bexhamla bonke ndawonye kummandla omangalisayo weempawu zobumnyama nobusika.
Imibongo yeklasikhi kubantwana malunga noKuzalwa kukaKristu 2017
Iingoma zeKrismesi ziyizinto ezingabonakaliyo zabantu baseRashiya. Ngokuqhelekileyo zifutshane kwaye zizaliswe ngokomzwelo, kodwa ngamanye amaxesha azifundanga ngokupheleleyo. Yintoni engenakutshiwo ngeendinyana zeklasikhi malunga neKrisimesi kubantwana. Ininzi yemisebenzi yabo iyingoma kwaye ichanekile kwimiba yombhalo, inomthwalo onamandla wokumisa kwaye ichaze ngesiganeko esikhulu ebomini bonke abantu abangamaKristu. U-Alexander Blok, u-Sergei Yesenin, u-Afanasiy Fet, u-Boris Pasternak kunye nezinye izibongo ezicula iingqungquthela zabo eziqhelekileyo malunga nokuzalwa kukaKristu iziganeko ezimangalisayo: izinto ezivela kwiNgelosi yaseZulwini eya kubelusi, ukufika kwamaMagi, inkwenkwezi yeBhetelehem, idlambo ekhanyayo kwiindawo zokuhlala. Ezinye izibongo ezimfutshane zabantwana zinonqulo olungaphantsi, kodwa alukho nto engabalulekanga. Benza i-Christmas ecocekileyo ngokuhlwa, intaba yezipho zabantwana phantsi kwesiqhamo esisezantsi, izithethe zaseRashiya kunye nokunye okuninzi. Qondanisa abantwana bakho ngemibongo yeklasikhi ngeKrisimesi, beka itoni yezobhiyozo ezizayo. Kwakukho ubusuku obumva kunye nobomvu, i-Star-Forerunner yenyuka. Ilizwi elitsha lalilila ngenxa yerhonkco - iNtsana yazala iNtombi. Ngelizwi lincinci kwaye litsalwe, Njengexesha elide lomkhonto, Makumele ukuba umntu omdala abe neengxaki kwiintlanzi, kunye nenkosi, kunye nomfana, kunye nomfazi. Kwaye kwakunomqondiso kunye nommangaliso: Ukuthula okungapheliyo Phakathi kwesihlwele kwavela uJuda Kwimisipha ebandayo, ngehashe. Inkosi, egcwele unyameko, Bathumela isigidimi kuzo zonke iziphelo, Kwaye kuthiwa ngomlomo we-Iskariyoli Ukumamatheka ngabathunywa.
Ubusuku buyaqhubeka. Ngenkqantosi, iinkwenkwezi ezinobungqingili, ukuzamazama kwezantsi. Amehlo enomama ngokumomotheka Kwindawo yokugubungela. Azikho indlebe, akukho zinyameko, - Ezigubungela ii-roosters- Kwaye iingelosi zincoma kakhulu abalusi bakaThixo. Ubuncwane buvutha kakuhle, ubuso buka-Ozaren ubuso bukaMariya. Inkwenkwezi yeenkwenkwezi kwi-choir eyahlukeneyo Ukuva ukukhwabanisa-kwaye ngaphezu kwayo iyatshisa loo nkwenkwezi yelizwe elikude: Ngelitshe layo ookumkani baseMpuma yeGolide, imure kunye nesiqhumiso.
AbaMagi beza. Usana lube lulele ngokulala. Inkwenkwezi yakhanya ngokukhazimulayo evela esibhakabhakeni. Umoya obanda kubanda ikhephu kwiqhwa leqhwa. Isanti ehluthwe. I-firefire ephihliweyo emnyango. Umsi waba yikhandlela. Ukucima umlilo. Kwaye izithunzi zaba mfutshane, emva kwangoko zikhawuleza. Akukho mntu wayesazi ukuba ingxelo yayiza kuqala ubomi obu busuku. AbaMagi beza. Usana lube lulele ngokulala. Imivumba ephakamileyo ye-nursery ijikelezwe. Ikhephu lalijikeleza. Umqhubi omhlophe wawuqhuma. Usana lulele, kwaye izipho zihleli.
Ivesi zanamhlanje zeKrismesi kubantwana
Amawaka abantwana abalindele ngokugubha umkhosi omangalisayo woKuzalwa kukaKristu. Isizathu sokungapheli komntwana osemhlabeni jikelele sisimo esiyingqayizivele esingaqondakaliyo kunye nokulungiswa kwemilingo kwangaphambi kweeholide. Ngokuqhelekileyo abantwana beqela elidala ubudala sele benengcamango yeKrismesi kwizifundo zesikolo, amabali amfutshane abazali okanye iinkqubo zethelevishini. Ngoko ke, ngeveki yeholide, bafunda iindinyana zanamhlanje kwiKrismesi kubantwana, iingoma zecawa zokugcoba kunye nezithethe eziqhelekileyo nezithethe. Kwaye abantwana bafanele bazi imimangaliso yasebusika, egcwele iholide kunye nexesha elingcwele lonyaka. Amantombazana amancinci kunye namakhwenkwe kuya kufuneka afunde iipalile zokuqala ezifutshane kunye nokuxelela abantwana babo kwivesi leKrisimesi. Krismesi - Amandla okubhiyozela kwasezulwini: Ngaloo mini, uKristu wayeza kusindisa ihlabathi lethu ebubini. Uzuko olungunaphakade kuye, Ukunyusa ubumnyama. Ndiyakuvuyela ngentliziyo yakho Ngalo uvuyo olukhulu.
Ngokukhawuleza umhlambi weenkunzi zeenkomo wenyuka waya emthini, u-Elka wabuyela ngokukhawuleza ekukhanyeni kwezibane eziphilayo. Kumagatsha akhe aphantsi, Endaweni yeensel, Rime shaves net, Snow ball. Kwaye isithsaba - Inkwenkwezi ibonakala, Imimangaliso yemimangaliso! IKrisimesi, abahlobo, idibana nehlathi eliphambili.
I-Snow-white igxotha iZamelo iingoma, Kwiqhwa Ukunyuka komntwana, Imithwalo, ikhupha iinyawo ... Kona uMsindisi kaThixo ushesha! Hamba kakuhle iindaba ezilungileyo - ngoMsindisi, sinokugcinwa, ngokuvumela umyalezo kwimiphefumlo.
Iingqungquthela zabantwana abancinane kwiKrismesi 2017
Wonke umzali owaziyo unyanzelekile ukuba afundise abantwana amasiko kunye namasiko ahlobene nomthendeleko omkhulu woKuzalwa kukaKristu. Emva kwayo konke, ukuphumelela kokuzalwa koMsindisi, kuyisiko ukulungiselela ngokucophelela: ukugcina ukutya, ukucela ukuxolelwa kwazo zonke izinto eziphosakeleyo, nokuthandazela izenzo zakhe ezimbi. Kungcono kubantwana ukuba bangenise ulwazi olubalulekileyo malunga neeholide ngendlela enomdla kwaye ifumaneka - ukubonisa imifanekiso yezenkolo, ukujonga iBhayibhile kwiimifanekiso, ukufunda iifesi zefutshane zeKrismesi 2017. Kungcono, ukuba ufunde nomntwana iimbongo ezifutshane zeKrisimesi ukuze inkunzi ikwazi ukuziqhayisa phambi izalamane okanye bathathe inxaxheba kwi-caroling yokuqala. Makube nomqondiso. Ngosuku lokuzalwa kukaKristu Ubuhle babuyela ehlabathini. NgoJanuwari umkhenkcelo ogqithiseleyo utyhala NgoJanuwari uNast akayi kunika i-snap. Ikhephu likaJanuwari yinto entle kakhulu kunayo yonke into: Usuku lukhangelekile kwaye lubalabala kwaye lukhanya phantsi kwenyanga. Yaye nganye imihla kaJanuwari incinane, kodwa yangaphambili ininzi. Kwaye kufanelekile kwimikhosi kunye neentlanganiso - naziphi na iinyanga.
Usomangalisa umhla! Uluhlu lwendalo! Ngaphantsi kokukhanya kweenkwenkwezi kuza iKrisimesi! Ufika kuyo yonke indlu, kwaye rhoqo, Njengomdlalo womntwana, uyavuya ngenxa yethu ....
Iqhwa limboze isixeko ngombala omhlophe, iiLangla ziqhwaqhaqhazela ngesibhakabhaka se-silvery. Ndiza kuhobisa indlu ngamagatsha am i-mistletoe, I-Screw in mylands of thuju nge-holly ...
Ebhakabhakeni i-asterisk, iphosa, Iya kuphela iya kuvela ngokukhawuleza, Yazi zonke: kuza kuza iholide, i-Bright holiday yeKrismesi ...
Imilotho emfutshane yama-Orthodox kwiKrisimesi yabantwana bakaKristu ukuze badumise
IKrismesi yasungulwa yiCawa ngoJanuwari 7 ekukhunjweni kokuzalwa kukaYesu Kristu, malunga nokubonakala kukaThixo kubantu ngesimo somzimba. Isiqalo sombhiyozo siwela kumaxesha amaninzi mandulo, kwaye ukuphumelela okusemgangathweni namhlanje kuthathwa njengeyona nto ibalulekileyo kwaye ibalulekileyo emva kwePasika. Imimori yeKrismesi inxulumene nezithethe ezininzi, iimpawu kunye neempawu. Ngokomzekelo, inkwenkwezi yaseBetlehem eqaqambileyo, isiqhumiso esimnandi, i-osovo, i-spruce eluhlaza, iindinyana ezifutshane-i-carols. AmaKristu anomthi uKrisimesi enhle, ehlotshiswe ngamakhandlela kunye nezibane, uthathwa njengophawu lomoya oyingcwele kunye nokuvuselela ubomi ... kwaye umntwana wakho uyazi ntoni ngeeholide eyimfihlakalo kunye nemilingo ngonyaka? Funda izinkondlo ezimfutshane zama-Ordodox ngokuzalwa kukaKristu kubantwana. Emva koko, lo msebenzi awusebenzi nje kuphela, kodwa unomdla kakhulu. Ukuzifundela abantwana ngeenjongo zeBhayibhile, ukufundisa abantwana ngomoya we-holide, funda ivesi elifutshane le-Orthodox ngeKrismesi. Iimali zeKrisimesi iminyaka. Lo mthendeleko kwakhona Uza edideni lethu kwaye uhamba nawo uvuyo lweminyaka yabantwana Kwaye wonke umhlaba uguqa ukukhanya, Ubudala buvuselela, uMladost usindisa. Ubusisiwe wena, iParish Parish!
Ebumnyameni bobusuku bobu busuku, Xa, ukhathala ngumsindo kunye nokuxhalaba, uMhlaba kwiingalo zezulu obochila, Kwaze kwaphela uThixo wazalwa nathi. Zininzi izinto ezingenakwenzeka nanamhlanje: Ookumkani bamazulu ababuki, Abalusi abaphulaphuli entlango, Njengezithunywa zezulu ngoThixo. Kodwa okuphakade okuvulekileyo kulobu busuku, - Ukunyamezela ngexesha, Kwaye kwakhona uLizwi emphefumlweni wakho wazalwa, Wazalelwa ngaphambi kwekhukhamba ixesha elide. Ewe, uThixo unathi, kungekhona kwintente ehlanjululwayo, Kungekho ngaphaya kwehlabathi elingenakubalwa, Kungekhona emlilweni ongendawo kwaye kungabi ngumoya oqhwithiyo, Nokuba kungekho kwiminyaka eminyaka. Ulapha, ngoku, phakathi kwempikiswano yengozi, kwisihlanjeni sokuxhalabisa ubomi obunenkathazo, Unobuncwane obuzukileyo: Unamandla ongenamandla! Sinophakade: nathi - uThixo!
Ubusuku buwela ngakwesokudla, Umqolomba uqulethwe ngamagi amathathu, i-Gaspard noMelchior ... kwaye ubuntwaneni bukude kakhulu, kwaye uninzi lweeminyaka luye lwaqhakaza. Kwaye uMntwana wayelele, Ukuphefumula ngokuqhumisa, Kwaye kwadlula ixesha elininzi, Kwaba nzima ukukhumbuza Nokucula, kwaye uqonde Oko i-choir yasezulwini yayithetha. Kubonakala ngobusuku uMelchior, Indlela ukukhanya kwakumnandi ngayo, Njengoko ubumnyama obumnandi benyuka, - Kulo kubanda kubusi bethu, Ubuso beminyaka bhanya ...
Ukulungiselela ngoJanuwari 7, funda inkondlo yabantwana ngeKhisimusi 2017. Xelela abantwana ukuba izibongo zeklasikhi zijwayele kuwe ukususela ebuntwaneni, kwaye yiyiphi into entsha eyenziwa ngeKrismesi ibonakala kwiminyaka yamuva. Khetha inkondlo yabantwana abancinci ngesiRashiya, isiNgesi okanye isiNgesi kwaye ufunde kuyo yonke intsapho. Akunomdla nje kuphela, kodwa uyonwabile.
Yintoni enokuyenza ngeKrisimesi ngaphambi kweKrisimesi ngoJanuwari 6 no-Epiphany ngoJanuwari 18: izithethe, iimpawu, ukuxhamla kunye neengxoxo
Indlela yokuthetha nabantu xa udibana nomfana?
Ukutshatyalaliswa kwemigudu? Lahla ngalo ngoncedo lokutya kokunciphisa
Ukufundwa komlingo wokucoca ikhumba
Ibala eliBomvu: I-BAON Collection ngu-Liasan Utiasheva S / S 2017